28 Jan 21 post
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင် ယနေ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး COVISHIELD/ Astrazeneca ကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံခြင်းကို မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ပထမအကြိမ် ထိုးနှံပေးခဲ့
22 Jan 21 post
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ လူစည်ကားရာနေရာများဖြစ်သော ကားဂိတ် ၊ ဈေးများ၌ ( ၂၂ . ၁ . ၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၉ : ၀၀) နာရီ အချိန်တွင် Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု အမူအကျင့်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ လူထူလှုပ်ရှားမှု STOP COVID-19 YELLOW CAMPAIGN ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် (၂၂-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ Yellow campaign ပြုလုပ်ရာတွင် Mask နှင့် faceshield များ ဝေငှခြင်း၊ Handheld speaker များဖြင့် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သော
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဒဂုံညွန့်ဈေးလမ်းအပြင် ပျံကျဈေးတွင် STOP COVID-19 အဝါရောင် Campaign
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်များတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
20 Jan 21 post
(၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဌေးကြွယ်ရပ်ကွက်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန် အိမ်အတွင်းအပြင်ရှိ အိုးခွက်များအား
ဒလမြို့နယ်အတွင်း STOP COVID-19 Yellow Campaign ကျင်းပပြုလုပ်
19 Jan 21 post
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းအချိန်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ဒလမြို့နယ် လူစည်ကားရာနေရာများဖြစ်သော သင်္ဘောဆိပ်၊ ကားဂိတ်နှင့်ဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု အမူအကျင့်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာလူထုလုပ်ရှားမှု
တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက်အတွင်း STOP COVID-19 အဝါရောင် Campaign ကျင်းပပြုလုပ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက်နှင့် လူစည်ကားသည့်နေရာ၊ ကားမှတ်တိုင် များတွင် STOP COVID-19 အဝါရောင် Campaign ဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူခြင်း၊ ဗီနိုင်းများကပ်ခြင်းကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့
တာမွေမြို့နယ်တွင် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမူပြောင်းလဲရေး ဆက်သွယ် ပညာ‌ပေးလူထုစီမံချက် (MASK AND FACE SHIELD CAMPAIGN) ကို အရှိန်ဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်
15 Jan 21 post
၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်၊ နံနက်(၉း၀၀) နာရီမှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အ‌ရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရှိ တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက်နှင့် လူစည်ကားသည့်နေရာများတွင် Mask And Face Shield , Pamphlet များဝေငှခြင်း၊ Hand Speaker များဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး
တာမွေမြို့နယ်တွင် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
14 Jan 21 post
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ တာမွေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း လုပ်ငန်း များကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ